Jolay 22, 2021 Antika Kumari Travel
Dhaka dia renivohitr'i Bangladesh, atsimon'i Azia. Eo akaikin'ny reniranon'i Buriganga, eo afovoan'ny governemanta nasionaly, varotra ary kolontsaina izy io. Ny tanàna tamin'ny taonjato faha-17 dia ny renivohitra Mughal Bengal, ary lapa maro ary
Jolay 21, 2021 Antika Kumari fianarana
Aiza no ahitanao ireo oniversite lehibe indrindra eto an-tany? Amin'ny ankapobeny, na aiza na aiza - anisan'izany i Nouvelle Zélande! Tsy milay ve? Betsaka ny andrim-panjakana ambony any Nouvelle-Zélande izay mifaninana amin'ireo oniversite iraisam-pirenena malaza indrindra eto an-tany. Amin'ny fanabeazana sy
Jolay 21, 2021 Antika Kumari Travel
Ny Banky Foiben'i Syria dia miandraikitra ny banky any Syria, ary koa ny fifanakalozana sy fifanakalozana varotra rehetra. Tamin'ny 1966, ny banky ara-barotra any Syria dia nahazo zom-pirenena. Ny Banky foibe dia manome vahana laharam-pahamehana ny fampindramam-bola amin'ny sehatry ny daholobe, fa ny
banky any nyc
Jolay 6, 2021 Antika Kumari Travel
Rehefa misafidy banky any NYC, ny mpianatra (sy ny ray aman-dreny) dia tokony hijery ny banky any amin'ny tanàna niaviany aloha, arahin'ny banky akaikin'ny toerana ipetrahan'ny mpianatr'izy ireo mandritra ny NYU. Ny ankamaroan'ny banky lehibe manana toerana nandritra ny boroughs,
Jolay 5, 2021 Antika Kumari asa
Te hiasa any New York City ve ianao? Ary tsy izany ihany Indiana, fa ny olona rehetra manerana izao tontolo izao kokoa ny asa tany Etazonia Amerika. Vakio ity lahatsoratra ity mba hianatra momba ny safidy sasany noho ny fitadiavana asa ao
Ahoana ny fomba hahazoana asa any beret?
Jolay 4, 2021 Antika Kumari Travel
Ny fambolena dia mampiasa olona an'arivony, indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra, izay loharanom-bola voalohany ahazoan'ny fianakaviana maro. Na izany aza, satria ny toekaren'i Albania dia mifototra amin'ny indostrian'ny serivisy fa tsy amin'ny sehatry ny famokarana, manjaka ny asan'ny mpanjifa